Inkqubo eQinisekisiweyo eNtsha yePenthouse Refrigeration-NEWS-Square Technology Group Co., Ltd.
Inkqubo eQinisekisiweyo yePenthouse Refriji eNtsha egqityiweyo
I-Square Technology ikhuphe inkqubo yayo entsha yefriji ngoJuni 1,2020. Le nkqubo ifriji egcweleyo i-100% ihlanganiswe kwangaphambili kwisakhelo esivaliweyo ngaphambi kokuhanjiswa. Iphantse yawususa umsebenzi wokudibanisa umbhobho wentsimi, ngaphandle konxibelelwano phakathi kwenkqubo yefriji kunye ne-evaporative condenser, eya kuthi ibekwe ngaphezulu kwesakhelo. Le meko yoyilo lobugcisa inezinto zilandelayo:
Ukonga indawo. Uyilo oluhambelanayo, zonke izixhobo kunye nemibhobho zifakwe kwisakhelo esenziwe ngepaneli yoyilo lobuchule
Ugcino lotyalo mali. Akukho gumbi longezwa kwifriji ekufuneka lakhiwe Gcina iindleko zokwakha. Indawo ebiyelweyo bubungqina bemozulu. Akukho sakhiwo songezelelweyo okanye uphahla olufunekayo.
Iindleko zofakelo lwentsimi kunye nexesha eligciniweyo. Onke amacandelo adityaniswe kwangaphambili kwaye imibhobho iqhagamshelwe kwangaphambili. Umthengi ufuna kuphela ukudibanisa imibhobho emithathu phakathi kwesixokelelwanga kunye nenkqubo yefriji ebaleni.
Ukonga umbane. Ukufikelela kuma-20% ombane unokugcinwa njengoko inverter isetyenziselwa ukunciphisa amandla ombane ngokungakhathali kwaye ngexesha lokwenyani ekuphenduleni umthwalo wefriji uqobo.
Ulawulo lwemozulu. Amafayili afakelwe ukubonelela ngokungenisa umoya ngokunyanzelwa kwaye agcine ubushushu bangaphakathi kuluhlu lokusebenza. Izibane zibonelelwa ngaphakathi kwendawo ebiyelweyo.
Amasango anikezelwe kuwo onke amacala evaliweyo ukufikelela ngokupheleleyo kwinkonzo yenkqubo yefriji.
Yenzelwe iimfuno ezahlukeneyo. Inkqubo inokuyilwa ngokwesiko ukuhlangabezana neemfuno zabathengi ezahlukeneyo, kubandakanya iimodeli zecompressor ezahlukeneyo, umthwalo wefriji, ifriji, njl.